Adeeg - shandong Gaoqiang Waxyaabaha Cusub ee Teknolojiyada Co., Ltd.
1. Fadlan laxiriir ninka iibiya. Waxaan si fiican kuu caawin karnaa:
2. Adeeg horay loo sii iibiyay
Fadlan noo sheeg sheyga aad rabto inaad iibsato. Ninka iibka ah ayaa ku siin doona warbixinta baaritaanka iyada oo loo marayo sawir dukumiinti ama muuqaal ah. Xogta baaritaanka qaarkood waxay ka yimaadaan shiinaha, qaarna dibadaha ayey ka yimaadaan.
Waxaan xog ka ururinay macaamiishayda. Haddii aad aad isugu dhowdahay, xogtu waxay yeelan doontaa qiime aad u sarreeya.
Ka dib markaad dejiso amarka, ninka iibka ayaa ku tusi doona jadwalka wax soo saarka oo wuxuu hubinayaa natiijada baaritaanka. Haysana hal muunad. Muunada lagu xusay taariikhda, magaca sheyga, wadanka. Waxay noqon doontaa si fiican hayn hal sano
3. Adeegga iibka kadib
1) Sababtoo ah kuwani waa walxo kiimiko ah, mararka qaarkood kuma xallin karno dhibaatada khadka tooska ah. Waxaan u duuli karnaa geedkaaga dufcadda oo aan kula xiriiri karnaa farsamadaaga. Waxaan leenahay waaya-aragnimo hodan ah oo ku saabsan qaanso la taaban karo iyo warshad dufcaddeed. Waxaanna kaa caawin karnaa inaad ku hesho hab wax ku ool ah oo sare xagga ganacsiga.
2) Kharashka safarka: waanu qaadeynaa kharashka
3) Waxaan leenahay qorshaha booqashada macaamiisha muddada dheer iyo abaalmarin lacageed siyaasad sanadle ah.
Abaabul: waxaan nahay koox shaqsiyaad ah. Waxaan u wada shaqeynaa yoolal isku mid ah.
La wadaag: qof kastaa wuxuu leeyahay xirfado gaar ah. Iyagu ha gutaan kaalintooda.
Baro: waxaan diyaar u nahay inaan wax baranno si aan u helno karti ku habboon.
Soo hel: waxaan diyaar u nahay in aan raadino karti aan ku soo biirno.
La xiriir: waxaan dhiiri galineynaa dooda shaqaalaha dhexdooda ah. Soo-jeedin kasta oo ku habboon xallinta dhibaatooyinka iyo kor u qaadista awoodda adeegga kooxda ayaa la qaadan doonaa.
Daryeel: waxaan siin doonaa taageero marka shaqaaluhu la kulmaan dhibaatooyinka.
Shandong Gaoqiang Qalabka Cusub Teknolojiyada Co., Ltd. waxay daboolaysaa mitir laba jibbaaran 9100 oo loogu talagalay aagga dhismaha iyo 600 mitir murabac oo loogu talagalay cilmi baarista sayniska iyo shaybaarka
Shirkaddayadu waxay dhistay khadka waxsoosaarka shaybaarka dhammaystiran, falanqaynta kiimikada iyo shaybaarka hantida jireed ee lala leeyahay Jaamacadda Shandong ee Dhismaha iyo Jaamacadda Beijing ee injineernimada madaniga ah, oo ku qalabaysan qalab casri ah oo lagu cabbiro laguna tijaabiyo aaladaha waaweyn iyo qalabka. Shirkaddayadu waxay leedahay koox cilmi baaris iyo horumarineed oo ka kooban dhakhaatiir xirfad leh, sayidyadeeda Akadeemiyada Shiinaha ee Sayniska Dhismaha.
Shaybaarku wuxuu tirakoob ku sameyn doonaa oo uu ku hubin doonaa alaabooyinka cusub suurtagalnimadooda iyo waxtarkooda tijaabooyinka ku taxan 1 sano Laakiin tijaabada la taaban karo waa in la sameeyaa ka hor intaan la isticmaalin sababtoo ah farqiga u dhexeeya sibidhka iyo ciidda. Sida ku xusan adeegeena iibka kadib, waxaan ku siin doonaa taageero farsamo goobta-bilaashka ah haddii loo baahdo.
Isku dhafka la taaban karo: bilaash
Waqtiga: muunadda waxaa loo soo diri doonaa 2 maalmood ka dib markii aan helnay kharashka degdegga ah
Xirmo: dhalada HDPE cad
Muuji: DHL ama FEDEX
Qiimaha xawaaraha: iibsade
Siyaasadda: markii iibsaduhu buuggayaga agabkeenna ka dhigayo, kharashka qaaliga ah ee weligii dhacay waxaa loo tirin doonaa qayb ka mid ah qiimaha.
1. soo dhawoow booqda warshadayda
Haddii aad xiiseyneyso alaabteyda fadlan kaalay Shiinaha oo booqo shirkadayda. Waxaan ku tusi doonaa habka wax soo saarka oo waxaan sameyn doonaa baaritaanka aad u baahan tahay inaad aragto. fadlan qaado shaybaarrada markii aad soo noqotid oo ku tijaabi sibidhkaaga iyo ciiddaada.
Hoteel: hudheelka ayaan kuu ballansanaynaa.
Qiimaha Safarka:Kharashka safarka ayaa loo xisaabin doonaa inuu yahay qayb ka mid ah badeecada markii aad dalbaneysid agabkeenna. Waxaan ku kalsoonahay alaabteyda maxaa yeelay waxaan sameynay isbarbardhigyo badankoodana adduunka.
2. Waxaan booqan doonaa shirkadaada
Sababtaas awgeed waa qalab kiimiko ah, mararka qaarkood kuma xallin karno dhibaatada qadka tooska ah. Waxaan u duuli karnaa geedkaaga dufcadda oo aan kula xiriiri karnaa farsamadaaga. Waxaan leenahay waaya-aragnimo hodan ah oo ku saabsan qaanso la taaban karo iyo warshad dufcaddeed. Waxaanna kaa caawin karnaa inaad ku hesho hab wax ku ool ah oo sare xagga ganacsiga.
Qiimaha safarka: kharashka ayaynu qaadeynaa markaad ballansato agabkeena.
Waxaan leenahay qorshaha booqashada macaamiisha muddada dheer iyo siyaasadda abaalmarinta maaliyadeed sanad walba.
Nooca superpolastikizer polycarboxylate nooca 1.liquid
1) Taangiga IBCk 1000kg ilaa 1200kg midkiiba, 1 × 20 'weelka wuxuu qaadan karaa 20 pcs taangiga IBC, Label wuxuu noqon karaa codsi
2) taangiga flexi: 20000kg ilaa 24000kg midkiiba, 1 × 20 'weelka wuxuu qaadan karaa 1 pc taangiga flexi, Lable wuxuu noqon karaa codsi
2 ilaa 5 maalmood kadib helitaanka deebaajiga
1. TT 30% dhigaalka, iyo 70% dheelitirka marka la arko nuqulka BL
2. LC oo aan laga hortagi karin marka la arko